Asan’ny Apostoly 17 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Paoly sy Silasy tany Tesalonika (1-9)
Paoly sy Silasy tany Beria (10-15)
Paoly tany Atena (16-22a)
Lahatenin’i Paoly teo amin’ny Areopago (22b-34)
17 Nandeha namakivaky an’i Amfipolia sy Apolonia izy ireo ka tonga tany Tesalonika.+ Nisy synagogan’ny Jiosy tany. 2 Dia niditra tao hoatran’ny fanaony+ i Paoly mba hitory tamin’izy ireo. Ary nandritra ny sabata telo izy no niezaka nandresy lahatra azy ireo, ka nampiasa ny Soratra Masina+ rehefa nanao an’izany. 3 Izay voasoratra tao no nampiasainy hanazavana sy hanaporofoana fa tsy maintsy nijaly+ sy nitsangana tamin’ny maty+ i Kristy. Ary hoy izy: “Ilay Jesosy izay toriko aminareo no Kristy.” 4 Lasa mpino àry ny sasany tamin’izy ireo, ka niaraka tamin’i Paoly sy Silasy.+ Maro be koa ny Grika mpivavaka amin’Andriamanitra sy ny vehivavy nanan-kaja lasa mpino. 5 Nialona+ azy ireo anefa ny Jiosy, ka namory olona ratsy fanahy mpirenireny teny an-tsena, ary nanangona vahoaka sy nampisahotaka ny tanàna. Dia niditra an-keriny tao an-tranon’i Jasona izy ireo, ary nitady an’i Paoly sy Silasy mba hamoaka azy ireo ho eo amin’ny vahoaka. 6 Rehefa tsy nahita azy roa lahy tao izy ireo, dia nitaritarika an’i Jasona sy ny rahalahy sasany ho any amin’ny lehiben’ny tanàna. Dia niantsoantso izy ireo hoe: “Tonga eto koa izao ireny lehilahy manakorontana ny tany* ireny,+ 7 ary nampiantrano azy i Jasona. Manohitra ny didin’i Kaisara izy rehetra ireo, ka milaza fa misy an’izany mpanjaka hafa atao hoe Jesosy+ izany, hono.” 8 Rehefa naheno an’izany ny vahoaka sy ny lehiben’ny tanàna dia nitebiteby. 9 Ary nakan’izy ireo antoka aloha i Jasona sy ireo namany vao navelany handeha. 10 Vao alina ny andro, dia nalefan’ireo rahalahy ho any Beria i Paoly sy Silasy. Ary vao tonga tany izy roa lahy, dia niditra tao amin’ny synagogan’ny Jiosy. 11 Nanana toe-tsaina tsara kokoa noho ny Jiosy tany Tesalonika ny Jiosy tany Beria. Tena nazoto nandray ny teny mantsy izy ireo, ka nandinika tsara ny Soratra Masina isan’andro mba hahitana raha marina izay noresahina taminy na tsia. 12 Maro tamin’izy ireo àry no lasa mpino, ary hoatr’izany koa ny vehivavy grika nanan-kaja maromaro sy ny lehilahy sasantsasany. 13 Rehefa fantatry ny Jiosy avy any Tesalonika anefa fa nitory ny tenin’Andriamanitra tany Beria koa i Paoly, dia tonga tany izy ireo mba hampirisika ny vahoaka hikorontana.+ 14 Avy hatrany àry dia nasain’ireo rahalahy nandeha nankany amoron-dranomasina+ i Paoly, fa i Silasy sy Timoty kosa nijanona tao ihany. 15 Nanatitra an’i Paoly hatrany Atena anefa ireo rahalahy. Lasa izy ireo rehefa avy nanafatra azy ireo i Paoly hoe tokony hankany aminy haingana araka izay azo atao i Silasy sy Timoty.+ 16 Dia niandry azy roa lahy tany Atena i Paoly. Ary sorena izy rehefa nahita hoe feno sampy tao amin’ilay tanàna. 17 Koa niezaka nandresy lahatra ny Jiosy sy ny olon-kafa nivavaka tamin’Andriamanitra izy, tany amin’ny synagoga. Ary nanao toy izany tamin’izay sendra hitany teny an-tsena isan’andro koa izy. 18 Nisy filozofa epikoreanina* sy stôika* anefa niady hevitra taminy. Ary hoy ny sasany: “Mba inona, hono, no tian’io be resaka io holazaina?” Ny hafa indray niteny hoe: “Toa mpitory momba ny andriamanitra vaovao, hono, izy io.” Nitory ny vaovao tsara momba an’i Jesosy sy ny fitsanganana amin’ny maty+ mantsy izy. 19 Koa nosamborin’izy ireo izy ary nentiny teny amin’ny Areopago.* Dia hoy izy ireo: “Mba azonay fantarina misimisy kokoa ve izany fampianarana vaovao resahinao izany? 20 Vaovao amin’ny sofinay mantsy izany lazainao izany, ka tianay ho fantatra ny dikany.” 21 Tsy nanao afa-tsy ny niresaka sy nihaino zava-baovao mantsy ny Atenianina sy ny vahiny rehetra nijanona* tao, rehefa tsy nisy hatao. 22 Dia nitsangana teo afovoan’ny Areopago+ i Paoly ka niteny hoe: “Ry Atenianina, hitako fa matahotra kokoa an’ireo andriamanitra* ianareo amin’ny zava-drehetra, raha oharina amin’ny olon-kafa.+ 23 Rehefa nandehandeha teny aho, ohatra, ka nandinika tsara ny zavatra ivavahanareo,* dia nahita alitara anankiray misy soratra hoe: ‘Ho An’Andriamanitra Tsy Fantatra.’ Koa izay tsy fantatrareo nefa ivavahanareo no toriko aminareo. 24 Ilay Andriamanitra nanao an’izao tontolo izao sy ny zava-drehetra ao aminy, dia tsy mba mipetraka ao amin’ny tempoly nataon-tanana,+ satria izy no Tompon’ny lanitra sy ny tany.+ 25 Tsy mila karakarain’ny tanan’olona izy, toy ny hoe mila zavatra,+ satria izy no manome ho an’ny olon-drehetra ny aina sy ny fofonaina+ ary ny zava-drehetra. 26 Ary avy tamin’ny olona anankiray+ no nanaovany ny firenena rehetra mba honina manerana ny tany.+ Ary nisy fotoana efa voatondrony sady nisy faritra efa nofaritany hipetrahan’ny olona,+ 27 mba hitady azy izy ireo, ka tena hahita azy tokoa+ raha mitsapatsapa mitady azy. Raha ny marina anefa, dia tsy lavitra antsika tsirairay izy. 28 Fa matoa isika velona sy mihetsika ary misy, dia noho izy. Ary na ny poety sasany eo aminareo aza milaza hoe: ‘Fa zanany* koa isika.’ 29 “Koa satria zanak’Andriamanitra* isika,+ dia tsy tokony hieritreritra an’Andriamanitra ho toy ny zavatra vita amin’ny volamena na volafotsy na vato, na hoatran’ny sary sokitra noforonin’ny olombelona sy niangaliany.+ 30 Marina fa ninia tsy nijery an’ireny andro tsy nahalalana azy ireny Andriamanitra.+ Izao anefa izy milaza amin’ny olombelona rehetra, na aiza na aiza, fa tokony hibebaka izy ireo. 31 Izy mantsy efa namaritra andro iray izay kasainy hitsarana+ ara-drariny ny tany,* amin’ny alalan’ny lehilahy iray voatendriny. Ary efa nanome antoka ho an’ny olona rehetra izy fa hitranga izany, rehefa nanangana azy io tamin’ny maty.”+ 32 Rehefa naheno momba ny fitsanganana amin’ny maty izy ireo dia naneso,+ fa ny sasany kosa nilaza hoe: “Mbola hihaino anao izahay amin’ny manaraka, rehefa miresaka momba an’izany ianao.” 33 Koa niala teo amin’izy ireo i Paoly. 34 Nisy sasany nanaraka azy ihany anefa ka lasa mpino. Anisan’izany i Dionysio, mpitsara tao amin’ny fitsarana teo amin’ny Areopago, ary ny vehivavy iray atao hoe Damary, sy ny olon-kafa.
^ Na: “nitsidika.”
^ Na: “fa mpivavaka kokoa.”
^ Na: “tompoinareo.”
^ Na: “naterany.”
^ Na: “naterak’Andriamanitra.”